Shan Sababood Oo Cristiano Ronaldo Uu Doonayo In Uu Ugu Laabto Manchester United Xagaagan - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaShan Sababood Oo Cristiano Ronaldo Uu Doonayo In Uu Ugu Laabto Manchester United Xagaagan
Shan Sababood Oo Cristiano Ronaldo Uu Doonayo In Uu Ugu Laabto Manchester United Xagaagan
Xiddiga reer Portugal ee Cristiano Ronaldo ayaa doonaya in uu dib ugu laabto kooxdiisii hore ee Manchester United oo uu ku qaatay muddo lix sannadood ah, guulo badanna uu la gaadhay.
Isagoo da’diisu aad u yar tahay ayuu sannadkii 2003 Cristiano Ronaldo ku biiray Manchester United, waxaanu la qaaday saddex horyaal oo Premier League ah iyo Champions League, halka uu abaal-marinta Ballon d’Or ku guuleystay isagoo jooga Old Trafford.
Sannadkii 2009 ayuu soo afjaray lix sannadood oo uu ku qaatay Manchester United isagoo u wareegay Real Madrid oo uu guulo badan oo kalena ku gaadhay ka hor intii aanu Juventus tegin sannadkii 2018.
Warbaahinta Ingiriiska ayaa shaacisay in xiddiga reer Portugal ay ugu dambayn ka go’an tahay in uu ku laabto Old Trafford, waxaana ku laabashadiisa Manchester United lagu sababeeyey shan arrimood.
Arrinta ugu horreysa ayaa waxay tahay, in Ronaldo aanu niyad-samaan ku dareemaynin Juventus, maadaama saddex sannadood oo uu joogay Old Lady uu ka fogaaday suurtogalnimada ahayd in uu mar kale ku guuleysan karo Champions League, ifafaalaha muuqdaana aanu macquul ka dhigayn in Juve ay waqtigan ku guuleysan karto.
Waxa kale oo uu Ronaldo dareensan yahay, in Manchester United ay awood u leedahay in ay dhaqaale ahaan fiican tahay oo ay awoodi karayso in ay bixiso mushaharkiisa oo toddobaadkii lagu qiyaasay illaa £520,000 Gini, taas oo ka dhigi doonta laacibka ugu mushaharka badan guud ahaan Premier League.
Manchester United ayaa iyaduna u baahan ciyaartoy afka hore ah oo kusoo kordhiya xoog cusub iyo doonis guuleed oo xad-dhaaf ah, taas oo Cristiano Ronaldo si dabiici ah ugu abuuran.
In Juventus ay wali kusii dhegsan tahay in ay qayb ka tahay Super League ayaa iyaduna ka mid ah qodobbada uu saluugsan yahay ee ku keenaya in uu ka baxo Turin, halka Manchester United ay taageereyaasheeda raalligelin siisay, kana baxday tartanka.
Qodobka ugu dambeeya ayaa waxa uu yahay, in Manchester United ay tahay koox ay joogaan xiddigo badan marka loo eego Juventus oo ay kusii yaraanayaan ciyaartoyda magaca leh ee culayska la qaybsanaya Ronaldo, taasina ay ku keento in canaanta ugu badan ay isaga ku habsato.
Si kastaba, waxa la eegi doonaa suuqa iibka ciyaartoyda ee xagaaga, haddii uu Cristiano Ronaldo xidh-xidho shandaddiisa oo uu ku laabto horyaalka Premier League iyo haddii uu sii joogo Juventus.